गर्भबाटै एचआईभी संक्रमित ! मिलन : गाउँ–गाउँमा सचेतना, स्टेजमा गीत ! - Sero Fero News
गर्भबाटै एचआईभी संक्रमित ! मिलन : गाउँ–गाउँमा सचेतना, स्टेजमा गीत !
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - ४ बैशाख २०७६, बुधवार
पाल्पा, वैशाख ४
पाल्पाको मुझुङ्गमा न्यून परिवारमा जन्मिएका हुन् मिलन (२२) । बाल्यकाल रमाइलोसँग बित्दै थियो । आमाबुवा, साथीभाइसँग खेल्दै, रमाउँदै थिए मिलन ।
त्यत्तिकैमा मिलनको जीवनमा बज्रपात आइपर्यो । ९ वर्षको हुँदा आमाको निधन भयो । त्यसको ठीक १ वर्षपछि बुवाको निधन । समाजमा हल्ला त थिए, बुवाले सास छाड्ने बेला भने, ‘म एचआईभी संक्रमित हुँ ।’
समाजमा हल्ला फैलियो, मिलनका बुवाआमा दुवैको एचआईभीका कारण निधन भयो । त्यसै वर्ष मिलनको स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखियो ।
‘शरीरमा एकाएक जनैखटिरा देखियो,’ मिलन सम्झन्छन्, ‘शंकाको भरमा सक्रिय सेवा समाजमार्फत रगत परीक्षणका लागि काठमाडौं ल्याइयो । नभन्दै रगतमा एचआईभी देखियो । म त गर्भबाट संक्रमित रहेछु ।’
मिलनले २१ दिन काठमाडौंको टेकु अस्पतालमा बिताए । त्यतिबेलासम्म गाउँ समाजमा हल्ला फैलिइसकेको थियो – मिलनलाई पनि एचआईभी लाग्यो । ‘एचआईभी प्राणघातक रोग हो भनेर रेडियो, टेलिभिजनमा सुनेको–हेरेको थिए,’ त्यो परिस्थिति सम्झँदै मिलन भन्छन्, ‘एकैछिन त धेरै रोएँ । तर आफूलाई सम्हाल्नु नै थियो ।’ त्यसपश्चात् शुरू भए उनका कष्टकर दिन ।
‘समाज अहिलेजस्तो कहाँ खुलेको थियो र ? एचआईभी भन्नेवित्तिकै धेरै घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो,’ मिलन पीडा स्मरण गर्छन्, ‘मैले पनि आफ्नै परिवार, समाज, साथीभाइबाटै त्यही भोगें ।’
बाहिरको त कुरै छाडौं, आफ्नै हजुरबुवा, हजुरआमाले उनलाई हेयको भावले हेर्थे । मिलन सम्झन्छन्, ‘उहाँहरूमा पनि एचआईभी सम्बन्धी चेतना नै थिएन ।’ मिलन स्कूल जान्थे, पढ्न मन लाग्दैनथ्यो । साथीहरू खेलिरहेका हुन्थे, उनलाई खेल्न मन लाग्दैनथ्यो । धेरै साथीहरू उनी सँगसँगै बस्न, खेल्न चाहँदैनथे ।
मिलन केवल टोलाइरहन्थे । एकान्तमा रोइरहन्थे । तर रोएर के गर्नु ? उनले जे पाए त्यसैलाई स्वीकार्दै तिरस्कार र घृणासँग जुध्दै अगाडि बढे । पढाइलाई अगाडि बढाउँदै गए । ८ कक्षासम्म पाल्पाको सोमहरमा निःशुल्क पढे ।
त्यसपछि बतासेस्थित कालिका माविमा १२ कक्षासम्म अध्ययन गरे । त्यहाँ पनि उनले निःशुल्क पढे । सोही क्रममा एचआईभीसँग सम्बन्धित संस्था सक्रिय सेवा समाजसँग जोडिए । त्यहाँबाट केही पैसा कमाउन थाले । जसोतसो मिलनको जीवन चल्दै गयो ।
एक बेसहारा बालक । एकातिर बाल्यावस्थामै खान लाउनको संघर्ष, त्यसमाथि समाजको छिःछि र दुरदुर ।
एक पटक कल्पना गरौं त ! त्यो परिस्थिति एउटा भर्खरको बालकलाई कति कष्टकर हुँदो हो ? मिलन खड्काले आफ्नो बाल्यकाल ठ्याक्कै त्यहीँ परिस्थितिमा गुजारे ।
आफू ९ वर्षको हुँदा आमा गुमाए । १० वर्षको हुँदा बुवा गुमाए । मिलन सहाराविहीन बने । आफन्त, साथीभाइ, समाजको छिःछि र दुरदुर पाए ।
मिलनको बाल्यकाल निकै कष्टकर रह्यो । आजभोलि समय फेरिएको छ । समाज फेरिएको छ । समाजका सोचहरू फेरिएका छन् ।
त्योसँगै मिलनको दिनचर्या पनि फेरिएको छ । मिलन आजभोलि सचेतनाका लागि गाउँगाउँ पुग्छन्, गीत गाउनका लागि मेला–महोत्सव ।
मिलनले आफ्नो वेदना समेटेर गीत नै सार्वजनिक गरेका छन् ‘मनको बह’ –
कति राम्रो हुन्थ्यो होला मेरो यो जीवन
यदि एचआईभी मलाई नलागेको भए
कति खुशी मन हुन्थ्यो, कति सुख जीवन हुन्थ्यो
यदि साथमा आमाबुवा भइदिएको भए ।
मिलन समाजसँग खुलेका थिए । ४ वर्षअघि एचआईभी एड्स दिवसको अवसरमा आयोजित प्रतियोगितामा मिलनले गीत सुनाउने अवसर पाए ।
उनको गीतले कार्यक्रममा उपस्थित धेरैको मन छोयो । त्यत्तिकैमा १ जना (दोलख कार्की) ले उनलाई गीत रेकर्ड गर्ने सुझाव दिए । ‘तैले यति राम्रो गीत गाउँछन् । एचआईभी सम्बन्धी त्यति गीत पनि आएको छैन । यो गीत रेकर्ड गर्नुपर्छ । हामी के सहयोग गर्नुपर्छ, गर्छौ भन्नुभयो,’ मिलन सम्झन्छन् ।
मिलनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । सो समय इन्द्रेणी समाज केन्द्रमा कार्यरत शम्शेर सारु, नेपाल परिवार नियोजन संघ लगायतको सहयोगमा आफूले गीत रेकर्ड गरेर भिडियो बनाएको मिलन बताउँछन् ।
त्यसयता उनलाई गीतसंगीतले पनि क्रमशः तान्दै गयो । हालसम्म १ दर्जन सेरोफेरोमा गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
मिलन अहिले एचआईभी एड्सको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ‘प्रतिवद्ध सहयोग समूह’मा कार्यरत छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पा शाखामा पनि आवद्ध छन् । सदरमुकाम तानसेनमा बसेर मिलन यी २ संस्थाबाट गाउँगाउँमा सचेतनाका लागि हिँड्छन् ।
मिलनले एचआईभी, गर्भनिरोधक साधनबारे जानकारी र वितरण, असहाय एचआईभी संक्रमितलाई सचेतना, उनीहरूलाई सहयोगका लागि अन्य संस्थासँग सहयोगको आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक सांगीतिक कार्यक्रममा पनि मिलनलाई निमन्त्रणा आउने गरेको छ ।
‘कतिपय कुराहरू मुखले बोलेर मात्र भन्दा गीतमार्फत बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले कार्यक्रममा गीतमार्फत पनि सचेतना दिँदै आएको छु,’ उनले भने ।
अहिले चेतनशील हुँदैछ समाज
मिलन आफूले बाल्यकालमा जे भोगे, अहिले समाज धेरै चेतनशील भएको बताउँछन् । हजुरबुवा, हजुरआमा बुझ्ने भएका छन् । समाजमा हेयको भावना निकै कम भएको छ ।
‘अहिले पहिलेजस्तो छैन । समाज धेरै बुझ्ने भएको छ,’ मिलन भन्छन्, ‘मेरै कुरा गर्दा पहिले हेलाको भावले हेर्नेहरू अहिले नजिक भएका छन् ।’ त्यसको पछाडि सचेतना भएको उनको बुझाइ छ ।
मिलन अहिले २२ वर्ष पुगेका छन् । एचआईभीको औषधि नियमित सेवन गर्छन् । आउँदा दिनमा पनि जीवनभर औषधि सेवन गरिरहनुपर्छ । डाक्टरको सल्लाह छ, सकेसम्म रमाइलोमा हिँड्नु । आफूलाई खुशी बनाउनु । उनी पनि त्यसै गर्छन् ।
‘अजम्बरी को छ र संसारमा ? सबैले एकदिन मर्नु नै छ । चिन्ता लिएर के गर्नु ? म सकारात्मक सोच लिँदै जीवनलाई उर्जाशील बनाएर खुशी साथ बिताउन चाहन्छु,’ मिलन भन्छन् ।
विवाहबारे मिलन भन्छन्, ‘कोही एचआईभी संक्रमित मन मिल्ने केटी पाए भने विवाह गर्छु । नत्र यो जीवन यत्तिकै खुशी साथ बिताउने प्रयास गर्नेछु ।’
अहिले समाज खुला हुँदै गएपनि नखुल्ने एचआईभी संक्रमितहरू पनि प्रशस्तै छन् । मिलन आफू अरुभन्दा फरक र प्रेरणादायी बनाउन चाहन्छन् ।
‘आफू त संक्रमित भए । अरु संक्रमित हुन नपरोस् । मैलेजस्तो दुःख पाउन नपरोस् । त्यसैले आउँदा दिन सचेतनामा बिताउने छु,’ मिलन भन्छन्, ‘यता गीतसंगीतले मलाई साथीभाइ दिएको छ । मलाई खुशी हुने बाटो दिएको छ । यसलाई पनि निरन्तरता दिनेछु,’ उनले भने । शुसील नेपाल (लाेकान्तर)